format_sary [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/e/e340b4135fe7b28de725711d5b37c1e0.xhtml failed
Ireo karazana formats sary:
JPEG: (Joint Photographic Expert Group),
Ny jpeg dia teknolojia famatrarana sary vokatry ny asan’ny fikambanana maty hanina momba ny fakana sary. Natao hifanaraka amin’ireo tranga rehetra izy, na sary miloko na mainty sy fotsy. Ho an’ny fotografia no tena ampiasana azy, ary isan’ny be mampiasa indrindra izy amin’izao. Ireo fakan-tsary numerique ihany dia mahavita ny famatrarana ny sary alainy.
Ny famatrarana jpeg dia mampisy very. Mampiasa ny fetran’ny fahitan’ny mason’ny olona izy, izany hoe tsy hitan’ny maso ny fahaverezana aterany. Saingy raha mbola hampiasaina amin’ny zavatra hafa ilay sary ohatra hoe hokirakiraina amina milina hanaovana analyse, dia mety handiso ireo fahaverezana ireo.
Ny sary nafatratra tamin’ny jpeg dia mitondra ny extension .jpeg, .jpg, .jfif. Marihina fa ampiasaina amin’ny sehatra hafa ny famatrarana jpeg, ohatra amin’ny rakitra tiff, pdf, swf.
GIF: (Graphic Interchange Format)
Ny gif indray dia format-na sary vokatry ny famatrarana manaraka ny teknolojia LZW izay an’i IBM sy Unisys. Loko 256 ihany no miasa aminy, saingy ny tena tombony dia afaka mifatratra ho kely dia kely ny sary azo aminy, afaka asiana mangarahara (transparent), ary azo anaovana sary mihetsiketsika (anime).
Efa lany andro amin’izao ny brevet momba ny gif, ka lasa malalaka tanteraka ny fampiasana azy.
Nisy license daholo ny format-na sary jpeg sy gif, ka tsy afaka nampiasaina teo amin’ny tontolon’ny rindrankajy open source. Vahaolana amin’izany no namoronana ny png. Famatrarana tsy misy very no ampiasainy, ary mety ampiasana mangarahara. Tsy dia tsara anefa izy raha hampiasaina amin’ny sary fotografia indrindra ny mainty sy fotsy.
format_sary.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43